Tani waa meesha kalluunku u baahan yahay | Kalluunka
Waxaa jiray marar badan oo aan soo eegnay haamaha kaluunka ama aquariums-ka ay ku jiraan xoogaa kalluun ah waxaanan ku ogaanay hal shay: the bannaan iyaga loo qoondeeyay waa wax aad u yar. Way cadahay inay jiraan daqiiqado aan suurta gal ahayn in la helo aquarium ka weyn, laakiin waa in sidoo kale maskaxda lagu hayaa in nooc kasta uu u baahan yahay boos u gaar ah.
Waxaa lagugula talin lahaa inaad isbarbardhigto booska kalluunka iyo kan aadanaha. Markay ilbiriqsiyadu yar yahiin, dareenkoodu lama mid ahaado inay wax badan haysteen. Way ka badan tahay caddayn. Hagaag, wax la mid ah ayaa ku dhaca xayawaankeena ku jira biyaha. Waxay u baahan yihiin degel muddo dheer ku filan ballaaran iyada oo loo marayo si loo guuro, iyada oo wadarta guud ee fudud. Haddii kale waxay noqon karaan kuwo dagaal badan ama xitaa dhinta. Xaaladaha iyaga khatarta ku ah iyaga.
Talooyinka aan u fidineyno kiisaskan waa kuwo iska fudud: intaadan kalluun badan gelin, hubi inay boos haystaan ku filan. Waxay qaadan doontaa daqiiqado yar in la arko haddii aquariums-yada ama taangiyada ay weyn yihiin oo lagu xajin karo tiro kalluun ah. Haddii aad aragto in degelku yar yahay, way fiicnaan doontaa in wax laga beddelo.
Haddii ay dhacdo inaadan aqoon inta boos ee loo baahan yahay, fikrad xun ma noqonayso inaad la xiriirto xirfadle kaa caawin kara arrintan. Xitaa waxaad aadi kartaa dukaan khaas ah oo ay gacan kaa siin karaan arrintan. Shaki kuma jiro in tartiib tartiib aad u awoodidoonto wax badan qasaarooyinka xayawaanka aad jeceshahay
Wadada buuxda ee maqaalka: Kalluunka » DIY Aquariums » Kalluunka sidoo kale wuxuu u baahan yahay booskiisa
Waxaad kudhowaad isku dari kartaa biyaha cusbada iyo kalluunka biyaha macaan
Daryeelka kalluunka libaax ee loo yaqaan kalluunka hangaralla